स्रष्टा चौतारीको पन्ध्रौं शृङ्खला सम्पन्न ,(खसखस सम्वाददाता)
रोल्पा, कात्तिक १५
मासिक रुपमा सञ्चालन हुँदै आएको स्रष्टा चौतारीको पन्ध्रौै शृङ्खला बिहिबार लिबाङमा सम्पन्न भएको छ । राप्ती साहित्य परिषद् जिल्ला शाखा रोल्पाको संयोजनमा सम्पन्न कार्यक्रममा साहित्यकारहरुबीच शुभकामनाको आदानप्रदान समेत गरिएको थियो । कार्यक्रममा गौरीकिरण डाँगी, गायत्री घर्तीमगर, गोकर्ण पुन, चन्द्रा सुनार, दिलकुमारी बुढामगर दिलुले कविता, डी.बी. टुहुरो र विनोद डाँगीले मुक्तक, यम विरही, सगरमाथा रोकामगर, कमल विवश मगर, एन्जिला घर्तीमगरले गजल तथा सागर अविरल जिसीले गीत प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
राप्ती साहित्य परिषद् जिल्ला शाखा रोल्पाको आयोजना तथा जिल्लास्थित विभिन्न क्रियाशील साहित्यिक संस्थाहरुको संयोजनमा स्रष्टा चौतारी कार्यक्रम हरेक महिना आयोजना हुँदै आएको छ । यस्तै स्रष्टा चौतारीमा वाचन भएका रचनाहरु स्रष्टा चौतारी हवाई पत्रिका रुपमा समेत प्रकाशन हुँदै आएको छ । हरेक महिना प्रकाशन हुने स्रष्टा चौतारीको अहिलेसम्म ७ अंक प्रकाशन भइसकेको छ ।
यसैबीच स्रष्टा चौतारीको सोह्रौ शृङ्खलाको संयोजन ललित साहित्य परिषद् रोल्पाले गर्ने निर्णय भएको राप्ती साहित्य परिषद् जिल्ला शाखा रोल्पाका अध्यक्ष डी.बी. टुहुरोले जानकारी दिए ।
फोटोः कार्यक्रममा सहभागी स्रष्टाहरु ।